पोलबाट खसेर विद्युत् प्राविधिकको मृत्यु- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
पोलबाट खसेर विद्युत् प्राविधिकको मृत्यु
भाद्र ३०, २०७७ अगन्धर तिवारी
पर्वत — विद्युत् लाइन मर्मत गर्ने क्रममा पोलबाट खसेर पर्वत वितरण केन्द्रमा कार्यरत एक प्राविधिकको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ सवा ७ बजे अवरुद्ध विद्युत् सुचारु गर्न कुस्मा नगरपालिका–७ खरेहामा पोलमा चढेका ३५ वर्षीय भोलाराम शर्माको मृत्यु भएको हो ।
प्रहरी निरीक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीका अनुसार पोलमा चढेर मर्मत गर्दै गरेका शर्मा अचानक सडकमा बजारिएका थिए । गम्भीर घाइते भएका उनलाई पर्वत अस्पताल पुर्‍याउनेबित्तिकै चिकित्सकले मृत घोषित गरेका थिए । ‘बेल्ट मात्रै लगाएको भए पनि यस्तो घटना नहुन सक्थ्यो,’ सुवेदीले भने, ‘बेल्ट, हेल्मेट केही नलगाई चढ्नुभएको रहेछ ।’ करेन्ट लागेर वा चिप्लिएर खसेको भन्ने खुलाउन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुर्नुपर्ने सुवेदीले बताए । उनका अनुसार शर्माको टाउकोको पछाडिपट्टि गहिरो चोट छ । शर्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वतमा तेस्रो तहको इलेक्ट्रिसियन पदमा कार्यरत थिए ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ ०९:१५
कोरोनाको खोप बन्‍नेबित्तिकै ल्याउन पहल
विज्ञ भन्छन्– ‘३० देखि ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने गरी खोप तत्काल चाहिन सक्छ
भाद्र ३०, २०७७ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — कोरोनाविरुद्धको खोप निःशुल्क वा सहुलियत दरमा समयमै ल्याउन सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारले कोरोनाको खोप बन्नेबित्तिकै सहज ढंगले प्राप्त गर्न ‘ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी)’ ले गरेको अग्रिम प्रतिबद्धता सहभागी हुन आशयपत्र पठाइसकेको छ । आशयपत्र गाभी सचिवालयको कोभाक्स सुविधाले प्राप्त गरेको पुष्टि गरिसकेको छ ।
डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेससले गत अगस्ट दोस्रो साता सदस्य राष्ट्रलाई पत्र लेखेर ‘विश्वव्यापी भ्याक्सिन सुविधा, कोभाक्स’ मा सामेल हुन आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो प्रणालीमार्फत निर्धन र धनी सबै मुलुकलाई प्रभावकारी खोप सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।’
डब्लूएचओका अनुसार हालसम्म १ सय ७० भन्दा बढी देश कोरोनाविरुद्धको खोप बनाउने अभियानमा सामेल भइसकेका छन् । अहिले १० खोपको परीक्षण भइरहेको छ, तीमध्ये ९ वटा क्लिनिकल परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ती ९ मध्ये चारवटा चीनका हुन् । बेलायत र भारतले पनि खोपको निर्माण युद्धस्तरमा गरिरहेको जनाएका छन् । हाल १ सय ४५ खोप ‘प्रि–क्लिनिकल ट्रायल’ (प्रयोगशालामै मूल्यांकन) भइरहेको डब्लूएचओले जनाएको छ । विश्वभरिमा १ सय ८० वटा खोपको विकास भइरहेको छ ।
परीक्षणको गुणस्तरबारे ख्याल नै नगरी कमसल परीक्षण प्रविधिलाई बढावा दिने बहानामा पीसीआर शुल्क घटाएको भेलाको आरोप छ । भेलाले सरकारसँग निजी प्रयोगशालाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै छलफल गर्ने जिम्मा ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्मालाई दिएको छ । शर्मा नेतृत्वको टोलीले सोमबार नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सेन्टरका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीलाई आफ्ना निर्णय बुझाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ ०९:१३